inona no ampiasaina amin'ny seza ao poker
mgm-pirenena mitana ny fialan-tsasatra sy ny casino
mgm-pirenena mitana ny slot payout
mgm-pirenena mitana ny slot machine list
inona no slot fetra ho snook
inona no slot fetra ho walleye in mn
Ny tompon'ny orinasa ity, Petera Townsend, nolazaina nanambara fa io toe-javatra io no nitarika azy 'mandoa liana amin'ny banky' fa tsy mampiasa izany vola ny mihazakazaka sy ny mitombo ny raharaham-barotra inona no ampiasaina any poker.
In Massachusetts sy ny toerana no voalaza fa labiera eo Wynn Resorts Voafetra sy ny zana-mpiantoka izay milaza ho nananan'ny am-polony tapitrisa dolara mifandray amin'ny fanampiana ny fanamboarana ny vao nisokatra Encore Boston seranan-tsambo tafiditra casino fialan-tsasatra inona no ampiasaina amin'ny seza ao poker. "Encore Boston Harbor efa nandoa ny rehetra faktiora natolotry ny mpiantoka, Suffolk Fanorenana mgm-pirenena mitana ny fialan-tsasatra sy ny casino. Ny fifandraisana eo amin'ny Wynn Resorts [Voafetra] ary Suffolk [Fanorenana] foana ampitiavana sy matihanina." Mpiantoka toky: Suffolk Fanorenana mpitondra tenin'ny, Dan Antonellis, nanambara fa ny mpiantoka dia mitohy 'ny asa mivantana sy ny zana-mpiantoka mba hamaha miavaka ara-dalàna ny olana' ary mbola matoky fa ny mafy, dia ho afaka 'hanatratra mahafa-po tsoa-kevitra ny hanakatona ny tetikasa mahomby.' mgm-pirenena mitana ny slot payout.
Encore Boston Harbor dia tsy miavaka amin'ny faktiora Suffolk Fanorenana mgm-pirenena mitana ny slot machine list. Mailman voalaza fa nilaza ny Boston Mpitondra hafatra.. inona no slot fetra ho snook. "Misy dingana izay no mitranga matetika mba handinika ny fiovana isam-bolana eo ny zana-mpiantoka sy ny tompon-javatra toy izany fa isika dia mahazo ny volavolan-dalàna ho an'ny rehetra ny fiovana izay mitranga. Be dia be fa nanangonanao amin'ny farany, ary dia tsy nisy vola fa maro ny fiovana nitranga." Sorohina liana: Ny Boston Mpitondra hafatra dia nitatitra fa ny faharoa ao an-toerana mafy, ML McDonald, dia milaza ny tenany ho nananan'ny ny $4 tapitrisa rehefa izany dia nentina nivoaka 'vita ny asa' ny 33-acre Encore Boston Harbor, izay nampidirina afo-proofing asa ihany koa ho toy ny sary hoso-doko ny toerana ny casino sy trano fisakafoanana inona no slot fetra ho walleye in mn.